Ukukhomba Impungushe Emnyama
Ukuze uphathe kahle isikhathi esidlule, umonakalo obangela isilwane udinga ukukhonjiswa ngokunembile. Ama-bite amamaki, ukulimala kwamathambo, amaphethini okudla, amathrekhi kanye nezinwele zezinwele kufanele zonke zicatshangelwe uma zikhomba obala.
Impungushe Eyinkimbinkimbi Emnyama
Ijaji elibusayo elimnyama libukeka njengenja. Inomsila omnyama omnyama owehliwe emhlane, umsila omnyama kanye nezindlebe ezibomvu ezibomvu ezibukhali. Zakhula zibe ngu-115 cm ubude, nezilwane ezindala ezilinganisa phakathi kuka-7 no-10 kg.
Amathrekhi abo anjengezinja-ezinjenge-oval-shaped futhi zibonisa amamaki angu-nails, ubude bethrekhi bude kunomkhawulo.
Ziyizilwane zasebusuku ukuthi, ngokwezikhathi, zingase zisebenzise ngokwazo noma njengengxenye yomndeni. Isibonakaliso sokuqala sokuthi bahamba ngemodi yokuzalanisa ukwanda kokukhala kusukela ngoMeyi noma ngoJuni, bakhala kancane uma beqala ukuzalana, ngokuthi banganikeli indawo yamasenti abo. Amaconsi ekushoneni kwelanga nokushona kwelanga angase abe eduze nendawo yabo yokuphumula, kodwa ukukhala phakathi nesikhathi sonke kungaba khona endaweni yabo yokuzingela noma emaphethelweni ebanga labo.
Phakathi nenkathi yokuzalanisa, iyoba yindawo engaphezulu futhi ibuye ixoshe ama-pups kusukela esikhathini esedlule sonyaka wokuzala. Izinsikazi zithwala ama-pups cishe izinsuku ezingu-63, futhi zizala kusukela ngo-Agasti kuya kuSepthemba.
Ama-pups azalwa emanzini amnyama, angaphansi komhlaba. Insikazi izohlala nama-pups phakathi kwamasonto amathathu okuqala noma kunjalo, lapho owesilisa kufanele aqoqe ukudla awulethe emgodini. Ngezinye izikhathi i-jackal encane ephuma esikhathini esedlule iyosebenza njengomsizi futhi ilethe nokudla.
Ama-pups ashukunyiselwa emgodini omusha ngenkathi eseba cishe amasonto amane ubudala. Ama-pups azohlala eseduze namasongo kuze kube yilapho esekhulile ngokwanele ukuhlola nabantu abadala ngoJanuwari, ngoFebhuwari. Ama-pups ase-black-backed jackal asebekhulile ngokwanele ukuze ahlolisise eyedwa ngoMashi, ngo-Ephreli. Ngemuva kwalokhu bazohlala beseduze nendawo eyinhloko, besebenzisa kuphela iminyango uma kudingeka ukubaleka.
Izimpungushe ezimnyama zivame ukuxosha inyamazane yazo bese ziluma isilwane eceleni kwekhanda layo. Kungase kube khona amamaki ezinyo ecacile phakathi kwendlebe kanye neleso lezilwane, noma indlebe yesilwane ingase ikhishwe. Ama-bite amamaki angase avele nasemhlane noma emilenzeni.
Bajwayele ukuthatha isilwane esisodwa ngokubulala, ngokudla okusuka kumawundlu kuya ezimvu ezibuthakathaka futhi ezinkulu futhi ngisho nezinkomo namathole. I-jackal ingase ihlasele inkomo elele phansi ukuze ikhule futhi ithole ukudla ithole njengoba ivela noma emlonyeni wenkomo nangaphakathi kwamagundane ezinyaweni.
Isibonelo sabo sokudla siwukuqala ukudla ekuguleni noma esiswini, ushiye isikhumba esikhuphukile ngaphansi. Bayokhipha amathumbu nesisu emzimbeni futhi badle izingxenye zangaphakathi ezincane njengehliziyo, isibindi nezinso. Ithimba lamathambo omhlubu angabuye ahlolwe. Ngokuvamile abahambisani nesidumbu endaweni yokubulala.
Ukuphathwa kumele kuhloswe kulabo abenza umonakalo. Ucingo lwama-jackal-proof, oluyizingalo eziyi-1,2 m oluvulekile oluvulekile lwama-74 mm, noma ucingo lwamandla kagesi, umsindo, ukukhanya nokuphunga, izilwane eziqaphayo, abelusi kanye nokubeka imfuyo enkathini ebusuku ukusiza ukuvimbela ukulahlekelwa.
Abalimi abangathanda ukusebenzisa ukuzingela ebusuku noma ukuzingela nezinja ukuze bagweme umonakalo obangela izimpungushe ezimnyama ezidinga ukufaka isicelo semvume emnyangweni wabo wokulondolozwa kwemvelo.